7 လက်မတစ်လောကလုံး stere ကားတစ်စီး DVD player China Manufacturer
ဖေါ်ပြချက်:7 ကားရေဒီယိုကို DVD,2 ဒင်ကား Player ကို,universal Stere DVD Player ကို
Home > ထုတ်ကုန်များ > Universal Android Car Dvd >7လက်မတစ်လောကလုံး stere ကားတစ်စီး DVD player
7 လက်မတစ်လောကလုံး stere ကားတစ်စီး DVD player
7 ပြောင်းလဲနေသောနောက်ခံရရှိနိုင်ပါသည်: ကိုယ်ပိုင်စိတ်ကြိုက်ပြောင်းလဲနေသောနောက်ခံ -7လက်မတစ်လောကလုံး stere ကားတစ်စီး DVD player များအတွက် 1. မော်တော်ကား DVD ။ ဖောက်သည်လည်းနောက်ခံအဖြစ်၎င်းတို့၏ရုပ်ပုံများကိုသုံးနိုင်သည်။
2.7လက်မတစ်လောကလုံး stere ကားတစ်စီး DVD player များအတွက်ကားတစ်စီး DVD အဘို့ဤပုံစံသည်ယခုအခါအလွန်တည်ငြိမ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ OEM ဝန်ဆောင်မှုလက်ခံပါ။ သင်ကလိုဂို, ထုပ်ပိုးခြင်းနှင့် UI ကိုအဘို့သင့်ကိုယ်ပိုင်ဒီဇိုင်းကိုသုံးနိုင်သည်။7လက်မတစ်လောကလုံး stere ကားတစ်စီး DVD player ဘို့ဒီကား DVD အဘို့အကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်အကြောင်းကို 20000 ကိုအပိုင်းပိုင်းတစ်လ, ဒါကြောင့်, ထုတ်ကုန်အကြောင်းကိုအဘယ်သူမျှမစိုးရိမ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ကအမြဲကဒီမှာနှင့်ကူညီပေးရန်အဆင်သင့်ဖြစ်လိမ့်မည်။
7 လက်မတစ်လောကလုံး stere ကားတစ်စီး DVD player များအတွက် 3.Our ကားတစ်စီး DVD, ဒီဇိုင်း, ထုတ်လုပ်မှုနှင့်စျေးကွက်ကားကို DVD ပလေယာအတွက်7နှစ်အတွေ့အကြုံများနှင့်အတူကျနော်တို့, ဂျပန်, ရုရှား, ယူကရိန်း, တူရကီ, စပိန်, ဂျာမနီကနေအများကြီးတန်ဖိုး clients များနှင့်အတူစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆက်ဆံရေးထူထောင်ခဲ့ကြ အီတလီ, အီရန်, ပါကစ္စတန်, ဒူဘိုင်း, အစ္စရေး, ကိုရီးယား, ဆော်ဒီအာရေဗျ, အိန္ဒိယ, ဘရာဇီး, etc ။ Universal ဘို့အားလုံး7လက်မကားတစ်စီး DVD player များအတွက်ကားတစ်စီး DVD အားလုံးကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းကအရမ်းပေါ်ပြူလာဖြစ်ပါတယ်။
4. ယခုငါတို့ 400 ကျော်မော်ဒယ်များအပေါငျးတို့သမော်ဒယ်များအပါအဝင် android ကားကို DVD player ကိုပေး။ တည်ငြိမ်မြန်ဆန်နောက်ဆုံးပေါ် software နှင့်ပလက်ဖောင်းနှင့်အတူအားလုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့ကားကို DVD player ။ အရည်အသွေးအာမခံချက်မှ,7လက်မတစ်လောကလုံး stere ကားတစ်စီး DVD player ဘို့ဒီကား DVD အီး / FCC သည် / RoHs / E-မာကုလက်မှတ်ရှိပါတယ်။ အရည်အသွေးငါတို့ဝိညာဉ်ပါ!
7 လက်မတစ်လောကလုံး stere ကားတစ်စီး DVD player များအတွက်ကားတစ်စီး DVD ၏ရုပ်ပုံများ
7 လက်မတစ်လောကလုံး stere ကားတစ်စီး DVD player များအတွက်ကားတစ်စီး DVD ၏ဆက်စပ်ပစ္စည်း
2din 7inch universal deckless car stereo အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
7 ကားရေဒီယိုကို DVD2ဒင်ကား Player ကို universal Stere DVD Player ကို E39 ကားရေဒီယို Player ကို Jetta ကားရေဒီယိုစက် I30 ကားရေဒီယို ကားရေဒီယိုကို AT FOCUS 2007-2011 kia Ceed ကားရေဒီယိုက GPS